AKHRISO Qaabkii Sirta Iyo Argagaxa Lahaa Ee Mohamed Morsi Loogu Dhex Dilay Maxkamadda - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAKHRISO Qaabkii Sirta Iyo Argagaxa Lahaa Ee Mohamed Morsi Loogu Dhex Dilay Maxkamadda
AKHRISO Qaabkii Sirta Iyo Argagaxa Lahaa Ee Mohamed Morsi Loogu Dhex Dilay Maxkamadda
Madaxweynihii hore ee dalka Masar, Mohamed Mursi ayaa si lama filaan ah ugu dhex-dhacay xayndaabka dacweysaneyaasha ee maxkamadda dhexdeeda, waxana uu galay koomo uu kasoo laaban waayey.
Inyar kaddib waxa lagu dhawaaqay inuu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuquraadi ah loo soo doortay ee dfalka Masar uu yeeshay.
Warbaahint dalka ayaa baahisay dhimashadiisa, laakiin layaabka dhacay wuxuu ahaa in aanay marnaba soo hadal qaadin inuu soo noqday madaxweyne.
Qoyskiisa ayaa dalbaday in lagu wareejiyo meydkiisa oo ay ku aastaan gobolkii uu kasoo jeeday ee Sharqiya, laakiin dawladda ayaa ka diiday, waxaana lagu aasay magaalada Qaahira iyadoo ammaankana ay sugayaan ciidamo aad u tiro badan, waxaana xabaasha joogay xubno tiro yar oo ka mid ah qoyskiisa.
Wiil uu dhalay Mohamed Mursi ayaa bartiisa Facebook ku daabacay qaabkii dawladdu ugu diiday in meydka aabbihii ay iyagu aastaan, waxaana uu sheegay in laga hor joogsaday, si cadna loogu diiday in gacantooda lasoo geliyo meydka oo ay ku aasaan halkii uu ku dardaarmay in lagu duugo oo ah gobolka uu kasoo jeedo ee ay qoyskiisuna deggan yihiin.
Haddaba, sidee ayey ku timid geerida Mohamed Mursi? Miyaa la dilay? Ma Isagaa is dilay mise si kale ayay wax u dhaceen?
Maqaal uu salaasadii daabacay wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalka Maraykanka, ayaa waxa uu soo bandhigay shirqoolkii lagu khaarajiyey madaxweyne Mursi, kaas oo qaab qarsoodi ah loogu dhex dilay maxkamadda.
Maqaalkan oo ay qortay Mona Eltahawy, qoraallo badan iyo doodo badanna ka samaysay ficillada axmaqnimada ah ee Abdelfatah el-sisi ku dhaqaaqay markii uu xilka qabtay iyo xasuuqii ba’naa ee uu u geystay dadkii lagu tuhmayey inay ka tirsan yihiin Ururka Ikhwaanul Muslimiin, ayaa waxay soo bandhigtay daliillo cadcad ah oo muujinaya qaab silic ah oo loo dilay Mursi.
Sida ay Mona Eltahawy sheegtay, Mohamed Mursi waxay ahayd in maxkamadda la keeno maalintii Axaddii oo hore loo shaaciyey in la dhegaysan doono kiiskiisa, laakiin lama keenin, waxaana ay dawladdu ku andacootay in lala sugayey rag kale oo tiro badan oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin oo maalintii Isniintii la hor keenayey.
Markii Isniintii la hor keenay maxkamadda, waxa lagu xareeyey xayn-daabka maxkamadda oo qufulan, isla markaana lagu xidhay qalab aamusiiinaya codka Mursi oo si kasta oo uu u qayliyo aanu hadalkiisu dibeccda usoo baxaynin (Soundproof system).
Qareenkii u doodayey Mohamed Mursi ayaa hore usii sheegay in madaxweynuhu dhimanayo, waxaana uu shaaciyey sababta oo ah qorshe ay dawladda milateriga ee Sisi ay nafta ku dhaafinayso. Qareenku wuxuu sheegay in madaxweynaha oo xanuunno badan hayaan laga joojiyey daawooyinkii uu qaadan jiray, amaba sidii ku habboonayd aan loo siinin.
Mona Eltahawy waxay sheegtay in dawladdu diidday in xukunkii xabsi daa’imka ahaa ee lagu riday Mursi oo markii dambe laga dhigay 45 sannadood, waxaanay qaadatay go’aan ay culayskiisa iskaga fududaynayso.
“Lixdii sannadood ee ugu dambeeyey waxa lagu hayey ciqaab, waxaana qoyskiisa qoyskiisa la tusay saddex jeer oo kaliya.” Ayey Mona Eltahawy ku tidhi qoraalkeeda lagu daabacay New York Times.
Intaas kaddib, waxay Mona Eltahawy soo bandhigtay qaabkii loo dilay Mohamed Mursi, waxaanay tidhi: “Waxa uu qabay xanuunada Macaanka, Dhiig-kar iyo beer-xanuun. Waxa loo diiday daawooyinkii, kaddib qareenadiisa ayaa ka digay inuu dhimanayo.”
Qoraalkan waxa lagu sheegay in maalmihii ka horreeyey maxkamaddii Isniinta, in Mohamed Mursi loo diiday daawooyinkii uu u baahnaa, kaddibna la keenay maxkamadda si marka uu cadhoodo ay ugu kacaan Dhiigga, Macaanka iyo Beer-xanuunkuba.
Markii uu dhulka ku dhacay Mohamed Mursi, looma fidinin caawimo degdeg ah, waxaanay xukaamta iyo ciidamadii ilaalinayey daawanayeen muddo ka badan 20 daqiiqadood, taas oo keentay in xaaladdiisa ay waxba ka qaban kari waayeen dhakhaatiirtu markii cusbitaalka la geeyey.
Dhakhaatiirta ayaa ku dooday in haddii xilli hore loo keeni lahaa, in ay badbaadin kari lahaayeen, balse xilli uu naf-baxay oo aanay waxba u tari karaynin lasoo gaadhsiiyey.
Si kastaba ha ahaatee, xogtan waxay muujinaysaa in lasoo qorsheeyey dhimashada Mohamed Mursi, maxkamaddana caddayn looga dhigay inuu horteeda ku geeriyooday.
Xuquuqda qoraalka: Bahda Jigjigaonline.com
Itoobiya Oo Gacanta ku Dhigtay $40 Milyan Oo Beesha Caalamku Kaga Taageertay Doorashada Iyo Wasiir Ahmed Shide Oo Ka Hadlay
Qaramada Midoobay Oo Ku Eedaysay Mohammad bin Salman Inuu Ka Dambeeyey Dilkii Jamal Khashogji
Khadar Siyad Hassan says:
21/06/2019 at 9:34 am
Waa xog xaqiiqada udhow wayna cadahey in la diley mudane Mursi aun